စင်္ကာပူတွင်အမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားများနှင့်လိင်ဆက်ဆံသောလိင်ကွဲဆယ်ကျော်သက်များ၏စိတ်ပိုင်းဖြတ်မှု - ၂၀၁၆ ခုနှစ်၊
comments: လေ့လာမှု porn အသုံးပြုခြင်းနှင့်လာရောက်လည်ပတ်ပြည့်တန်ဆာများအကြားသိသိသာသာဆက်စပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုအကြောင်းကိုဆောင်းပါးတစ်ပုဒ် (ဧပြီလ 10) ။ ဆောင်းပါးကနေကောက်နှုတ်ချက်:
နောက်ထပ်စိုးရိမ်စရာတွေ့ရှိချက်လိင်များအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့သောသူတို့၏အမျိုးအကြောင်း, သူတို့ရဲ့ပျမ်းမျှအသက်သာ 16 နှင့် 38 ရာခိုင်နှုန်းတစ်ဦးလိင်လုပ်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတှေ့ဆုံခဲ့ခံခဲ့ရသည်။
ဆရာဝန်များနှင့်လူမှုရေးလုပ်သားများနှစ်ခုအဓိကအချက်များအဘယ်ကြောင့်အဘို့အကောင့်ပြောပါ ပိုပြီးဆယ်ကျော်သက်ပြည့်တန်ဆာသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ပထမဦးဆုံးအညစ်ညမ်းအွန်လိုင်းဖို့လွယ်ကူစွာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ကဒီမှာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုကြေငြာဒုဝက်ဘ်ဆိုက်များတစ်ပြန့်ပွားရှိခဲ့သည်။
ငါတို့သည်လည်းရန်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ကိုတွေ့ ဒီအမူအကျင့်။ အဆိုပါ multivariate-ချိန်ညှိမော်ဒယ်တှငျကြှနျုပျတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်များ၏အငယ်အသက်, အနိမ့် Self-လေးစားမှုရမှတ်အဆင့်မြင့်ပုနျကနျရမှတ်, ဘယ်တော့မှသတင်းပေးပို့သူကိုမြီးကောင်ပေါက်မယ့်လိင်တက်ကြွရည်းစားရှိခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရညစ်ညမ်း၏, နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏကြည့်ရှု FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ဘဲလျက်အစဉ်အဆက်သတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်
ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု 27 နှစ်ပေါင်းပျမ်းမျှအသက်အရွယ်နှင့်အတူအိန္ဒိယရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရန်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့သိသာထင်ရှားသောအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်, ထိုသို့ညစ်ညမ်းသူတို့ကို paid လိင်ဆီသို့တစ်ဦးထက်ပိုအပြုသဘောတိုးတက်စေနှီးနှောခဲ့သည်။ 
Junice YS Ng သည်, Mee-လျန် Wong က
Published: ဇန်နဝါရီ 25, 2016
ကျနော်တို့၏အချိုးအစားအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်အတူဆက်နွယ်လူမှုဂေဟစနစ်အချက်များအစဉ်အဆက်လိင်ကွဲမြီးကောင်ပေါက်အကြားအမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားများ (FSWs) နဲ့လိင်ခဲ့ဘဲလျက်။ ငါတို့သည်လည်း FSWs နှင့်အတူကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံတင်ပြသူမြီးကောင်ပေါက်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများဖော်ပြခဲ့သည်။
73 ၏ 300 လိင်ကွဲတက်ကြွအထီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏ 16 နှင့် 19 အကြားစင်္ကာပူမှာနေတဲ့အမျိုးသားရေးကာလသားဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်း 2009 နှစ်: ဒီ cross-section လေ့လာမှု (2014% တုံ့ပြန်မှုနှုန်းသည်) ဖြစ်ပါသည်။ ကျနော်တို့ဂေဟစနစ်အချက်များ (တစ်ဦးချင်း, မိဘ, သက်တူရွယ်တူ, ကျောင်းနှင့် medial လွှမ်းမိုးမှု) နှင့်တစ်ဦးကိုယ့်ကိုယ်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြမေးခွန်းလွှာကို အသုံးပြု. လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေကိုအကဲဖြတ်။ Poisson ဆုတ်ယုတ်ညှိပြီးပျံ့နှံ့အချိုး (APR) နှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှုကြားကာလ (CI) ရရှိရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။
အစဉ်အဆက် FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ကြသောလိင်ကွဲအထီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏အချိုးအစား 39% ဖြစ်ခဲ့သည်။ တစ်လိင်တက်ကြွရည်းစား (Apr 16 CI 1.79-1.30) မရှိခဲ့ဘူး, နိမ့်ကိုယ်ပိုင်အစီရင်ခံ: Multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ 2.46 အသက်အနှစ် (1.75-1.28 Apr 2.38 CI) မတိုင်မီကာလအစဉ်အမြဲ FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ဘဲလျက်နှင့်ဆက်စပ်သိသာထင်ရှားသောအချက်များလိင်စတင်ခဲ့ကြသည်ကွောငျးဖျောပွခဲ့ လေးစားမှုရမှတ် (Apr 0.96 CI: 0.93-0.98), မြင့်မားသောပုနျကနျရမှတ် (Apr 1.03 CI: 1.00-1.07) နှင့်ညစ်ညမ်း (Apr 1.47 CI: 1.04-2.09) ၏ပိုပြီးမကြာခဏကြည့်ရှု။ FSWs နှင့်အတူတစ်သက်တာကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု 30% ဖြစ်ခဲ့သည်။
အများပြည်သူကာလသားဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်းလိင်ကွဲအထီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏တစ်ဦးကသိသိသာသာအချိုးအစားအစဉ်အဆက် FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့လေသည်။ ဒီအမူအကျင့်မှသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်အမှာစကားပြောကြားကြောင်းတစ်ဦးကပစ်မှတ်ထားဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလိုအပ်ပါသည်။ မြီးကောင်ပေါက်များ၏စဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအချိုးအစားရပ်ရွာမှကာလသားဂီယာတစ်ခုတံတားအဖြစ်အစေခံစေခြင်းငှါအဘယ်သူသည် FSWs အတူကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုအစီရင်ခံသောကွောငျ့ဤသည် ပို. ပင်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးအပေါ်အမျိုးသားစစ်တမ်းများစီးပွားဖြစ်လိင်လာရောက်လည်ပတ်သူအကြိမ်ရေ၏အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့်ရေရှည်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ဘို့ FSWs နှင့်အတူကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုတို့ပါဝင်သည်သငျ့သညျ။
ကိုးကား: စင်္ကာပူမှာအမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားများနှင့်အတူလိင်ထားရှိခြင်းသည်လိင်ကွဲပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏ ng JYS, Wong က ML (2016) ပြဌာန်းခွင့်။ PLoS ONE 11 (1): e0147110 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0147110
အယ်ဒီတာ: ယေရှဲ Lawton Clark က, UCLA, အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆေးပညာဒေးဗစ်ဂက်ဖင်ကျောင်း
Received: ဇွန်လ 26, 2015; လက်ခံခဲ့သည်: ဒီဇင်ဘာလ 29, 2015; Published: ဇန်နဝါရီလ 25, 2016
မူပိုင်: 2016 Ng သည်, Wong က©။ ဒါက၏စည်းကမ်းချက်များအောက်မှာဖြန့်ဝေကာပွင့်လင်း access ကိုဆောင်းပါးဖြစ်ပါသည် ကို Creative Commons Attribution လိုင်စင်, အရာမရှိသောအသုံးပြုမှုကိုခွင့်ပြု, ဖြန့်ဖြူးခြင်း, မည်သည့်အလတ်စားအတွက်မျိုးပွား, မူရင်းစာရေးသူနှင့်အရင်းအမြစ်အသိအမှတ်ပြုကြသည်ဖြစ်သည်။
ဒေတာကိုရရှိနိုင်: ကြောင့်ပါဝင်သူ privacy ကိုနှင့် ပတ်သက်. ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များသည်အနည်းငယ်မျှသာဒေတာအစုကိုတောငျးဆိုခကျြအပျေါမှာရရှိနိုင်စေမည်ဖြစ်သည်။ အဆိုပါဒေတာအတွက်တောင်းဆိုမှုများကိုသက်ဆိုင်ရာစာရေးဆရာ (သို့ပို့စေခြင်းငှါ[အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]).
ရန်ပုံငွေရှာခြင်း: ဒီလေ့လာမှုကအမျိုးသားဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီ (NMRC), စင်္ကာပူတို့ကငွေကြေးထောက်ပံ့နေသည်။ အကျိုးစီးပွားမျှပဋိပက္ခရှိပါသည်။ NMRC 1) လေ့လာမှုဒီဇိုင်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်မရှိ၏ (2) စုဆောင်းခြင်း, analysis နှင့်အချက်အလက်များ၏အနက်ကို; (3) ကအစီရင်ခံစာ၏အရေးအသား; နှင့် (4) ထုတ်ဝေများအတွက်စက္ကူတင်သွင်းဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်။
အမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားများ (FSWs) ၏ clients အာရှအတွက်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု၏ဂီယာအတွက်အကြီးဆုံး core ကိုအုပျစု (အက်စ်တီအိုင်) နှင့်လူ့ immunodeficiency virus ကို (HIV ပိုး) ဖြစ်ကြသည်။  တရုတ်မှာတော့ FSWs ၏ clients များအထွေထွေအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူဦးရေနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါအသီးသီး 12 ကြိမ်နှင့်6ကြိမ် HIV နှင့်ဆစ်ဖလစ်နှင့်အတူကူးစက်ခံနေရ၏အလေးသာရှိသည်ဖို့တွေ့ရှိခဲ့သည်။  အန္တရာယ်များနေသော်လည်းစီးပွားဖြစ်လိင်၏ပြည်ခိုင်ဖြိုးအာရှအတွက်လူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုအဖြစ်ရှုမြင်သည်။ [3, 4]
အိန္ဒိယတွင် 46,961 လိင်တက်ကြွယောက်ျား၏တစ်ဦးကအမျိုးသားရေးစစ်တမ်းအငယ်အထီးလူကြီးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုကိုဝယ်ခြင်းငှါပိုမိုမြင့်မား propensity ရှိသည်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။  ဒီလေ့လာမှု, 15 ခုနှစ်တွင် 24 တစ်နှစ်ကြားရှိမှနှစ်ကြိမ်ထက်ပိုနိုင်ဖွယ် 45 အသက်နှင့်အထက်အတိတ်တစ်နှစ်အတွက် FSWs နှင့်အတူလိင်အတွက်စေ့စပ်ရှိသည်ဟုထိုထက်ခဲ့ကြသည်။ အဟောင်းကို 15 နှစ် 24 အကြားသူတို့၏အမျိုးအ, 41% FSWs နှင့်အတူတသမတ်တည်းကွန်ဒုံးမသုံးကြဘူး။ သို့သော် FSWs နှင့်အတူလိင်အတွက်စေ့စပ်နှင့်ဤအပြုအမူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်တွေကဒီလေ့လာမှုမှာအစီရင်ခံကြသည်မဟုတ်သူကိုကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ WHO ကအဟောင်းနှစ်ပေါင်း 10 မှ 19 အဖြစ်သတ်မှတ်မြီးကောင်ပေါက်များ၏အချိုးအစား။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသိပညာရဲ့အကောင်းဆုံးစေရန်, အာရှတိုက်မှာမြီးကောင်ပေါက်အဘို့အထူးဒီအပြုအမူကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းမရှိတိကျတဲ့ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုအရင်းအမြစ်များကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားနှင့် FSWs ပစ်မှတ်ထားကြားဝင်မှသည့်နေကြသည်ဖြစ်ကောင်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လက်ရှိလည်းမရှိ။ နောက်ထပ်ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းပြချက်ကဒီအပြုအမူမျိုးကိုဤအထိခိုက်မခံဒေတာများစုဆောင်းခြင်းများအတွက်မိဘသဘောတူခွင့်ပြုချက်အတိုင်းဥပဒေနှင့်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာကန့်သတ်နိုင်ဖို့ ascribed နိုင်ရာသည်၎င်း၏ဆက်စပ်အချက်များ၏ပြင်းအားအပေါ်အချက်အလက်များ၏နည်းပါးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ [6ဒါကြောင့်ငယ်ရွယ်တဲ့လူကြီးကာလအတွင်းအပြုသဘောမိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုသြဇာလွှမ်းမိုးနိုင်သောကြောင့်] မည်သို့ပင်ဆိုစေ, ဒီအုပ်စုကိုပစ်မှတ်ထားထိပ်တန်းအရေးပါမှုသည်။  ထို့ပြင်အာရှအဟောင်းတွေမြီးကောင်ပေါက်အကြားအသစ်သော HIV ပိုးကူးစက်မှု၏ဒုတိယအများဆုံးရှိပါတယ်။  သို့သျောလညျး, မလုံလောက်သောဒေတာကြောင့်ဒီအုပ်စုအသစ်က HIV ပိုးကူးစက်မှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်အတွက်တိုးတက်မှုမရှိခြင်းလည်းမရှိ။ 
ဝယ်ယူမှုလိင်နှင့်ဆက်စပ်ဆက်စပ်မှုအပေါ်အများဆုံးလေ့လာမှုများအထီးအရွယ်ရောက်နမူနာပါဝင်သည်စဉ်တွင် [2, 5, 9-11] အနည်းငယ်အထူးသမြီးကောင်ပေါက်တို့တွင်အသင်းအဖွဲ့များသို့ကြည့်ရှုကြ၏။ [12, 13] မြီးကောင်ပေါက်အကြားလိင် purchasing အပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုနှင့်အန္တရာယ်အပြုအမူများ၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအပေါ်တွေ့ရှိချက်များလွန်းရောစပ်ပြီ။ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိတစ်ဦးကအမျိုးသားရေးလေ့လာမှုနောက်ပိုင်းတွင်နှစ်ပေါင်း (12 နှစ် 17 အသက်) တွင်လိင်ဝယ်ယူနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့အစောပိုင်းမြီးကောင်ပေါက်အရွယ် (18 နှစ်အသက် 26) အတွက်အချက်များအကဲဖြတ်။  ဒါဟာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသမိုင်း, မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုနှင့်အစဉ်အဆက်အိမ်ကနေအပြေးအန္တရာယ်အချက်များဖြစ်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်တွင်, ကနေဒါမှာရှိတဲ့ကျောင်းတစ်ကျောင်း-based စစ်တမ်းအတွက်, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရန်နှင့်အတူဆက်စပ်ကြဘူး။ ဤလေ့လာမှု၌,3နှစ် 15 အကြားသူတို့၏အမျိုးအ 18% ဟောင်းအစဉ်အဆက်လိင်ဝယ်ခဲ့ကြပြီးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူမှုရေးလှုပ်ရှားမှုများလေ့လာတွေ့ရှိကြပါပြီပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်ရှိကြ၏နှင့်လည်းပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းကိုဦးတည်ပိုပြီးအတည်ပြုချက်သဘောထားကိုရှိသည်။ [12ဒီလေ့လာမှုကမြီးကောင်ပေါက်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရန်နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့အချက်တွေအပေါ်နားလည်မှုမြှင့်တင်ရန်ရည်ရွယ်နေစဉ်] ငါတို့သည်လည်း FSWs နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံနှင့်ဆက်စပ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအပေါ်သတင်းအချက်အလက်များအတွက်ကွာဟမှုကိုဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ ဒီအစဉ်အဆက် FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ကြသောစင်္ကာပူအတွက်အများပြည်သူကာလသားဆေးခန်းလာရောက်လည်ပတ်လိင်တက်ကြွအထီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏အချိုးအစားအဖြစ်ဒီနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူမှုဂေဟစနစ်အချက်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေကိုဖော်ပြရန်သောဤလေ့လာမှု၏အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ, စေပါတယ် အပြုအမူ။ အဆိုပါအလယ်တန်းရည်မှန်းချက် FSWs နှင့်အတူတသမတ်တည်းကွန်ဒုံးမသုံးခဲ့ဘူးတဲ့သူမြီးကောင်ပေါက်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုဖော်ပြရန်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်အပေါ်အမျိုးသားရေးအမူအကျင့်စောင့်ကြည့်နေဖယ်ကျဉ်ထားလျက်ရှိသည်အဖြစ်စင်္ကာပူမှာ ပို. ပင်အရေးပါကိုဖန်ဆင်းသောလိင်တက်ကြွအထီးမြီးကောင်ပေါက်များအတွက်အစီအစဉ်များကိုအကြောင်းကြားကိုကူညီလိမ့်မယ်။
ဤခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက်ဒေတာအတွက်အခြေခံကနေရေးဆွဲခဲ့ကြစင်္ကာပူအတွက်သာအမျိုးသားကာလသားဆေးခန်း, ထိုကာလသားထိန်းချုပ်ရေးဌာန (DSC) ဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အဘို့ (ClinicalTrials.gov အရေအတွက် NCT02461940 နှင့်အတူမှတ်ပုံတင်) အလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက်အကဲဖြတ်လိုအပ်ပါသည်။ ဒေတာကိုနိုဝင်ဘာလ 2009 နှင့်ဒီဇင်ဘာလ 2014 အကြားစုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ဒီဆေးခန်းထဲမှာအံမှုကငျြးများအတွက်အကြောင်းပြချက်နှစ်ဆဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးစွာစင်္ကာပူမှာ Notifier အက်စ်တီအိုင်အတူမြီးကောင်ပေါက်များ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 80% ကိုနှစ်စဉ်ဒီဆေးခန်းတက်ရောက်ခဲ့သည်။  ဒုတိယအဤဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုတက်ရောက်လည်းစင်္ကာပူမှာရှိတဲ့မြီးကောင်ပေါက်အကြားကာလသားဂီယာ၏အဓိကအုပ်စုတစ်စုရှိပါတယ်။ ဒီလေ့လာမှုအဘို့အပါဝင်စံခဲ့ကြသည်: ဘယ်တော့မှသီးသန့်လိင်ကွဲဖြစ်ခြင်းသတင်းပေးပို့သူကိုလက်ထပ်အထီးမြီးကောင်ပေါက်, အမျိုးသမီးနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံရှိခြင်းအဖြစ်သတ်မှတ်နှင့်အသက် 16 ပထမဦးဆုံးအကြိမ်များအတွက်ဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်း 19 ရန်။ စင်္ကာပူမှာလိင်များ၏ဥပဒေရေးရာအသက်အရွယ် 16 နှစ်ရှိပြီဖြစ်သကဲ့သို့, ငါတို့ပြဌာန်းမုဒိမ်းကျင့်မှုအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအောက်တွင်ထားရှိခံရဖို့သူဟောင်း 16 နှစ်ပေါင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောမြီးကောင်ပေါက်, စုဆောင်းခဲ့ပါဘူး။
ဒီလေ့လာမှုကအမျိုးသားကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု Group မှဒိုမိန်းအတိအကျကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ လေ့လာမှုအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူသူကိုမြီးကောင်ပေါက်, လေ့လာမှုတစ်ခုရှင်းပြချက်ကိုလက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်များစာရွက်ဖတ်ရှုခြင်းနှင့်အင်တာဗျူးနှင့်အတူမေးခွန်းများကိုရှင်းလင်းပြီးနောက်သဘောတူညီချက်ပုံစံကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သဘောတူညီခကျြပုံစံများသင်တန်းသားများပြန်လာသောထက်, DSC ဆေးခန်းထဲမှာတစ်သော့ခတ်ကက်ဘိနက်ထဲမှာသိုထားခဲ့ကြသည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုနှင့်သင်တန်းသားများကိုအသက်၏သဘောသဘာဝပေးထားသောသူတို့နေအိမ်နဲ့ DSC ဆေးခန်းမှ၎င်းတို့၏ခရီးစဉ်ကိုညွှန်ပြတော်မူသောပုံစံများကိုရောက်စေဖို့မဖြစ်နိုင်ခဲ့ကြကြောင့်ဖြစ်ခဲ့သည်။ အဲဒီအစား, သူတို့အများပြည်သူသောနေရာများ၌မိမိတို့အမည်များနှင့်ဝိသေသလက္ခဏာနံပါတ်များကိုဘှားမွငျသောလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပုံစံများကိုစွန့်လွှတ်လိမ့်မယ်။ သို့အတွက်ကြောင့်သင်တန်းသားများဖို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ပုံစံများကိုပြန်သွားဖို့အကြံပြုလိုတယ်မဟုတ်ခဲ့ပေ။ အဆိုပါပါဝင်သူကရယူချင်သင့်တယ်မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ထိုလက်မှတ်ရေးထိုးသဘောတူညီချက်ပုံစံကိုဆေးခန်းမှာပါဝင်သူမှမရရှိနိုင်ခဲ့။ အဆိုပါလေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်အဖြစ်, (အမေရိကန် $ 50 အထိ) ကာလသားဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများအဘို့ကုန်ကျစရိတ်တစ်နှစ်တစ်နှစ်သင်တန်းသားများအဘို့အသက်ညှာခဲ့သည်။
မေးခွန်းလွှာမှအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုရှိခဲ့သည်။ ဒေသစစ်တမ်းများနှင့်မိဘအုပ်ထိန်းပေါ်ပထမဦးဆုံးအစိတျအပိုငျးဆေးခန်းတစ်ခုပုဂ္ဂလိကဧရိယာထဲမှာလေ့လာမှုသင်တန်းသားများနှင့်အတူဒေသခံဝန်ထမ်းများကမျက်နှာ-to-မျက်နှာအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်။ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရခဲ့သည့်ဒုတိယအပိုင်း, ထိုကဲ့သို့သောအန္တရာယ်နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအဖြစ်အထိခိုက်မခံသဘာဝတရား၏မေးခွန်းများကိုပါဝင်သည်နှင့်စစ်တမ်းရဲ့အဆုံးမှာထားရှိခဲ့ပါသည်။ လူမှုရေးလိုလားဘက်လိုက်မှုလျှော့ချရန်, သင်တန်းသားများကိုလျှို့ဝှက်ခြင်းနှင့်အမည်ဝှက်စိတ်ချပါခဲ့ကြသည်။ သူတို့ဟာပိုကောင်းတဲ့သူတို့ရဲ့အပြုအမူတွေကိုနားလည်ရန်နှင့်ထိုသူတို့အဘို့အစီအစဉ်များကိုစီစဉ်ဖို့တွေ့ရှိချက်သုံးစွဲဖို့ခဲ့သည့်လေ့လာမှုရည်ရွယ်ချက်အကြောင်းအကြောင်းကြားခဲ့ကြသည်။
လေ့လာမှုကာလအတွင်းဆေးခန်းသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သူ 409 အရည်အချင်းပြည့်မီမြီးကောင်ပေါက်၏, 300 (73%) ဟုဝန်ခံနှင့်အခြေခံစစ်တမ်းပြီးစီးခဲ့သည်။ Non-သဘောတူညီခကျြအတှကျအဓိကအကြောင်းရင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး Interventional လေ့လာမှုမှကျူးလွန်ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမအသက်၏စည်းကမ်းချက်များ၌ဖြေဆိုသူနှင့် Non-ဖြေဆိုသူအကြားကွဲပြားခြားနားမှု (p = 0.320) နှင့်မျိုးနွယ်စု (p = 0.704) ရှိခဲ့သည်။
ရလဒ်ကို variable ကို။
ဒီအစဉ်အဆက်မေးခွန်းအပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သော FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ပွီးတဲ့ dichotomized variable ကိုဖြစ်ခဲ့သည်: "သင်ပထမဦးဆုံးလိင်ခဲ့ကတည်းကဘယ်လိုအကြိမ်ပေါင်းများစွာသင်တစ်ဦးကိုပြည်တန်ဆာနှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံခဲ့တာလဲ" "1" သို့မဟုတ်ပိုပြီးပြန်ဖြေသူများသည် "အဖြစ်ခွဲခြားခဲ့သည် "FSW နှင့်အတူလိင်မရှိခဲ့ဘူး 0" ညွှန်ပြသောသူတို့အားအနေဖြင့် "" အဖြစ်ခွဲခြားခံခဲ့ရသည် "အစဉ်အဆက် FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ဘဲလျက်။
ကျနော်တို့ [Multi-ဂေဟစနစ်မော်ဒယ်အဆင်ပြေအောင်15] အစဉ်အဆက်တစ်ဦးချင်း, မိဘ, သက်တူရွယ်တူ, ကျောင်းနှင့်မီဒီယာလွှမ်းမိုးမှုတိုင်းတာကြောင်းဆောက်လုပ်ရေးပါဝင်သည်ရာ FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ရှိခြင်းနဲ့ဆက်စပ်အချက်များအကဲဖြတ်ရန်။ ကို item-based ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကို item တစ်ခု Likert စကေးသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့်ပစ္စည်းများကိုတစ်ရမှတ်ကိုဖန်တီးရန်ချုပ်ဖော်ပြခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦးချင်းအဆင့်ကို: ကျနော်တို့လူမှုလူဦးရေဆိုင်ရာသွင်ပြင်လက္ခဏာများ (အသက်, နေထိုင်ရာအမျိုးအစား, လူမျိုးရေး, ဘာသာရေး, ကျောင်းပညာရေးနဲ့အလုပ်လုပ်အခြေအနေနှင့်ပညာရေးအဆင့်အထိ), အန္တရာယ်အပြုအမူတွေ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးမှုနှင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များ၏သမိုင်းအကဲဖြတ်။ စွန့်စားမှုအပြုအမူတွေကိုဆေးလိပ်မသောက်, အရက်သောက်ခြင်း, ဂိုဏ်းတိုက်ပွဲတွေနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲခြင်းလည်းပါဝင်သည်။ [7-item ကိုပုနျကနျ (Cronbach ရဲ့ alpha = 0.62): အဆိုပါကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစရိုက်များကိုအောက်ပါတို့ပါဝင်သည်16] 6-item ကိုအာရုံ-ရှာကြံ (Cronbach ရဲ့ alpha = 0.78)  4-item ကိုရိပ်မိ၏ပြင်ပထိန်းချုပ်မှု (Cronbach ရဲ့ alpha = 0.72)  နှင့် 10-ကို item Rosenberg က Self-လေးစားမှုစကေး (Cronbach ရဲ့ alpha = 0.66)  ။ အဆိုပါကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရိုဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တစ်ဦးချင်းစီကို item "ရုံငါကဲ့သို့သော" "တစ်ဦးကအများကြီးငါကဲ့သို့သော", "ငါ့ကိုကြိုက်မ", "ငါကဲ့သို့သော၏စီ" ၏တစ်ဦး 4-အမှတ် Likert စကေးသုံးပြီးနှင့်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။
မိဘအဆငျ့: မိဘသြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် 7-ကို item (Cronbach ရဲ့ alpha = 0.79) ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းတောင်းဆိုနေတာနှင့် 8-ကို item သော authoritative မိဘအုပ်ထိန်း (Cronbach ရဲ့ alpha = 0.72) ညွှန်းကိန်းသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်  တစ်ဦး 4-အမှတ် Likert စကေးအပေါ် rated တစ်ဦးချင်းစီကို item အဖြစ်ကြေညာချက် "ငါလိင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့မေးခွန်းတွေနှင့်အတူမိဘ / s ကိုသွားနိုင်မခံစားရ" အတွက်တုံ့ပြန်မှုအတူ။
ရွယ်တူချင်းအဆင့်ကို: [တဲ့ 6-အမှတ် Likert စကေး (Cronbach ရဲ့ alpha = 4) ကို အသုံးပြု. 0.74-item တခုကိုသက်တူရွယ်တူချိတ်ဆက်: ရွယ်တူချင်းသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနှစ်ခုအစိတ်အပိုင်းများအပေါ်အခြေခံပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်20] နှင့်မေးခွန်း "သင်လိင်ဆက်ဆံခြင်းရှိသည်ဖို့အဘို့သင့်မိတ်ဆွေများထံမှရှိပါတယ်ဘယ်လောက်ဖိအားဖြစ်ပါတယ်?"
ကျောင်းအဆင့်: School စွမ်းဆောင်ရည် "? သင်ကျောင်းပညာသင်နှစ်စွမ်းဆောင်ရည်အတွက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်မယ်လို့အဘယ်မှာ" ဟုအဆိုပါမေးခွန်းများကိုအားဖြင့်အကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်နှင့် "သင်သည်အဘယ်မှာကျောင်းတွဲဖက်သင်ရိုးလှုပ်ရှားမှုများတွင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအဆင့်အတန်းသတ်မှတ်မလဲ"
မီဒီယာအဆင့်အထိ: အစုလိုက်အပြုံလိုက်မီဒီယာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာများထိတွေ့မှု၏3အမျိုးအစားများအပေါ်အခြေခံပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်: 1) အများပြည်သူ-access ကိုမီဒီယာ, 2) စင်္ကာပူမှာပိတ်ပင်ထားမီဒီယာ, ကြောင်းဖြစ်ပါသည်, ညစ်ညမ်းပစ္စည်းနှင့် 3) အချက်အလက်ဆိုင်ရာမီဒီယာ။ ပြည်သူ့-access ကိုမီဒီယာလိင်သို့မဟုတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်ကွင်းများသရုပ်ဖော်ထားတဲ့တီဗီအစီအစဉ်များ / ရုပ်ရှင် / ဗီဒီယို / သီချင်းများကိုရည်ညွှန်းသည်။ ထိတွေ့မှု၏ frequency လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအပေါ်တစ်ဦး 3-item ကိုပေါင်းစပ်ရမှတ်သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည်  (အတော်လေးမကြာခဏခဲ, တစ်ချိန်ကစဉ်အတွက်နီးပါးတိုင်းအချိန်) တစ်ဦး 4-အမှတ်စကေးအပေါ်တစ်ဦးချင်းစီကို item အတူ။ ညစ်ညမ်းထိတွေ့မေးကဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် "ဘယ်လိုမကြာခဏသင်ဖတ်သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းပစ္စည်းကိုကြည့်သလဲ?" Information မီဒီယာမှထိတွေ့မှုအစဉ်အဆက်အက်စ်တီအိုင် / HIV / AIDS ရောဂါကူးစက်တစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းကိုတီဗီအစီအစဉ်များ / ရုပ်ရှင်ဖတ်ခြင်းသို့မဟုတ်စောင့်ကြည့်ဘဲလျက်ကိုရည်ညွှန်းသည်။ အဆိုပါဟုတ်ကဲ့တခုရဲ့ဥပမာ / အဘယ်သူမျှမကြေငြာချက် "ကျွန်မလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါများကူးစက်သူတစ်စုံတစ်ဦးအကြောင်းကိုသတင်းစာသို့မဟုတ်မဂ္ဂဇင်းထဲမှာဖတ်ပါပြီ။ " ဖြစ်ပါတယ်
သင်တန်းသားများကို (ပါးစပ်အင်္ဂါဇာတ်သို့မဟုတ်စအိုလိင်ဆက်ဆံအဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့သည့်) ပထမဦးဆုံးလိင်၏အသက်အရွယ်ကဖော်ပြခဲ့သည်နှင့်ကျွန်တော်ဟောင်း 16 နှစ်ပေါင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောအဖြစ်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်သတ်မှတ်ပါတယ်။ အားလုံးမိတ်ဖက်နှင့်အတူအင်္ဂါဇာတ်လိင်များအတွက်ယေဘုယျအားတစ်သက်တာကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကို "မမှာအားလုံး", "အမြဲတမ်း", "တခါတလေ" ၏ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူ "? သင်သို့မဟုတ်သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်အစဉ်အဆက်အမျိုးသမီးအင်္ဂါဇာတ်လိင်များအတွက်ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုဖူး" နှင့် "မအောက်မေ့နိုင်သလား" အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည် ။ တူညီသောမေးခွန်းတစ်ခုကိုနဲ့ options ပါးစပ်နှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံဘို့ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုအသုံးချခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင်၎င်းတို့သည် "ရည်းစား, ပြည်တန်ဆာ client ကို, ပေါ့ပေါ့ဖက်သို့မဟုတ်အခြားသူများ" ၏ရွေးချယ်မှုများနှင့်အတူသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဖော်ညွှန်ပြခိုင်းတယ်။ သင်တန်းသားများကိုတစ်သက်တာအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဖက်များ၏အရေအတွက်ကိုညွှန်ပြလည်းလက်တွဲဖော်များအောက်ပါအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီအတွက်အရေအတွက်က, "Girlfriend (s), ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်း (s), လိုင်း (s), Stranger / အသိအကျွမ်းနှင့်အခြားသူများ" ရန်လိုအပ်သည်။
ရောဂါအက်စ်တီအိုင်လေ့လာမှုမှကျောင်းအပ်သည့်အချိန်တွင်ဓာတ်ခွဲခန်းစမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူအတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားကူးစက်ဆစ်ဖလစ်, (သားအိမ်ခေါင်းကင်ဆာ, urethral, ​​pharyngeal, rectal) gonorrhea, ကလျမီဒီရာ, Non-gonococcal urethritis, လိင်အင်္ဂါရေယုန်, လိင်အင်္ဂါကြွက်နို့, molluscum contagiosum, ဆီးခုံမို့မို့ခွငျကောငျနှင့် HIV ပါဝင်သည်။
ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုကိုဦးတည်သဘောထားကို7ထုတ်ပြန်ချက်များ၏ချုပ်ဖော်ပြရမှတ်အပေါ်အခြေခံပြီးခဲ့သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုထုတ်ပြန်ကြေညာချက် "လုံးဝသဘောမတူ" ၏တစ်ဦး 5-အမှတ် Likert စကေးနှင့်အတူအကဲဖြတ်ခဲ့ပါတယ်, "သဘောမတူ", "ကြားနေ", "Agree" နှင့် "လုံးဝသဘောတူ" ။ ဤရွေ့ကားပါဝင်သည်: (1) ကွန်ဒုံးအက်စ်တီအိုင်ဆန့်ကျင်ကာကွယ်ထားတဲ့ထိရောက်သောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ (2) ကွန်ဒုံးကိုအလွယ်တကူချိုး။ (3) ငါကွန်ဒုံးသုံးစွဲဖို့က bothersome / အဆင်မပြေရှာပါ။ (4) ကွန်ဒုံးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပျြောအပါးလျှော့ချပေးပါတယ်။ (5) ကွန်ဒုံးလိင်လျော့နည်းရှုပ်ထွေးစေပါ။ (6) ကွန်ဒုံးစျေးကြီးတယ်။ (7) ဒါဟာငါတဦးတည်းမလိုအပ်သည့်အခါကွန်ဒုံးရရန်လွယ်ကူ / အဆင်ပြေပါတယ်။ items 2, 3,4နှင့်6ပြောင်းပြန် coded ခဲ့ကြသည်။ ကြှနျုပျတို့သညျ "သင်သည်အဘယ်သို့ထင်ကြဘူးအက်စ်တီအိုင်ရတဲ့သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်ပါတယ်?" ကိုသုံးအက်စ်တီအိုင်ရတဲ့သူတို့ရဲ့ရိပ်မိအခွင့်အလမ်းအကဲဖြတ်ရန်။ သင်တန်းသားများကိုလည်းအကောင်းဆုံးသူတို့လက်မထပ်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်းနှင့် ပတ်သက်. ခံစားရပုံကိုဖော်ပြထားတယ်သောကြေညာချက်ကို select ဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။
အစဉ်အဆက် FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ဘဲလျက်အစီရင်ခံတင်ပြသူကိုဖြေဆိုသူလည်းဒီအပြုအမူနှင့် ပတ်သက်. ပိုမိုသိရှိလိုပါကပေးဖို့တောင်းခံခဲ့ရသည်။ FSWs နှင့်ကိုက်ညီကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကို "သင်အစဉ်အဆက်ကနောက်ဆုံး 1 တစ်နှစ်အတွက်ပြည့်တန်ဆာနှင့်အတူကွန်ဒုံးသုံးပြီးစဉ်းစားဖူးသလော" ဟု option ကို "ငါသည်ပြည့်တန်ဆာနှင့်အတူလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်ကွန်ဒုံးကိုသုံးပါ" "တသမတ်တည်းကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစားခြင်းနှင့်ရွေးချယ်စရာ၏ကျန်ခဲ့ပါသည်သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့သည် ငါကွန်ဒုံးအသုံးပြုချင်ပေမယ့်အခုငါမတိုင်မီကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုကြပါပြီ "," ဘယ်လိုသိသော်လည်းမပါဘူး "," ငါကစဉ်းစားခဲ့ကြပေမယ့်သေးပါက အသုံးပြု. စတင်ကြပြီမဟုတ် "," ကသုံးပြီးစဉ်းစား "နှင့်" ဘယ်တော့မှ တစ်ခါတလေ "ကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအဖြစ်အုပ်စုဖွဲ့ခဲ့ကြသည်ကွန်ဒုံးသုံးပြီးပါပြီ။ သူတို့ကအစတစ်ဦးထက်ပိုတုံ့ပြန်မှုရွေးချယ်ရာတွင်၏ထို option, တိုင်းပြည် (အကြောင်း, စင်္ကာပူ, ထိုင်း, အင်ဒိုနီးရှား, ကမ္ဘောဒီးယား, မလေးရှား, တရုတ်, အခြားအာရှနိုင်ငံများသို့မဟုတ် West ဖြစ်ပါသည်) နှင့်အမျိုးအစား (အကြောင်း, တန်ဆာဖြစ်ပါသည်, လမ်းများနှင့်အတူမေးခဲ့သည်, စီးပွားဖြစ်လိင်လာရောက်လည်ပတ်သူအနှိပ်ခန်း, အရက်ဆိုင် / အရက်ဆိုင်သို့မဟုတ်ဟိုတယ်များ) ။ ကျနော်တို့ Non-တန်ဆာ-based setting များကိုအဖြစ်လမ်းများ, အနှိပ်ခန်း, အရက်ဆိုင် / အရက်ဆိုင်များနှင့်ဟိုတယ်များခွဲခြား။
bivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းခုနှစ်, အမျိုးအစား variable တွေကိုစဉ်ဆက်မပြတ် variable တွေကို Wilcoxon ရာထူး - ပေါင်းလဒ်စမ်းသပ်သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်သော်လည်းအမျိုးအစား variable တွေကို, chi-square သို့မဟုတ်လမ်းကြောင်းစမ်းသပ်မှုသုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ဘက်ပေါင်းစုံခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်းအတွက် Poisson အားဆန့်ကျင်သောအားဖြင့် FSWs နှင့်လိင်ဆက်ဆံဖူးကြောင်းတင်ပြသောဆယ်ကျော်သက်များ၏မြင့်မားသောအချိုးအစား (> 10%) ကြောင့်ခိုင်မာသောကှဲလှဲများဖြင့်အစားထိုးထောက်ပံ့မှုကိုအစားထိုးအသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျနော်တို့မော်ဒယ်တည်ဆောက်ရန်ရှေ့ဆက် stepwise နည်းလမ်းကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ bivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှ p <0.1 နှင့်အတူတစ်ခုချင်းစီသီအိုရီအယုတ္တိတန်သည်ဟုဆိုရမည်လွတ်လပ်သော variable ကိုရှေ့ဆက်ရွေးချယ်ရေးသုံးပြီး, မော်ဒယ်သို့ဝင်ခဲ့သည်။ ၎င်းတို့တွင်အရက်သောက်ခြင်း၊ ပုန်ကန်ခြင်း၊ မိမိကိုယ်ကိုလေးစားမှု၊ ပြင်ပမှထိန်းချုပ်မှု၊ သိပ္ပံဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများ၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ခြင်း၊ ၁၆ နှစ်မတိုင်မီလိင်ဆက်ဆံသောချစ်သူရည်းစားရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ မော်ဒယ်အတွက်အများဆုံးအပြောင်းအလဲတွက်ချက်သောပထမ ဦး ဆုံး variable ကိုရှေးခယျြခဲ့, နှင့်ဒုတိယ variable ကိုထိုနည်းတူရှေးခယျြခဲ့သညျ။ အများဆုံး parsimonious မော်ဒယ်ရရှိရန်ရလဒ် variable ကို၏ခန့်မှန်းအတွက်အဘယ်သူမျှမသိသိသာသာကွဲပြားခြားနားမှုရှိခဲ့သည်သည်အထိနောက်ဆက်တွဲ variable တွေကိုထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ ဤပုံစံသည်လူ ဦး ရေစာရင်းပြောင်းလဲခြင်း (အသက်၊ လူမျိုး၊ နေထိုင်မှုအမျိုးအစား၊ ပညာရေးအဆင့်) နှင့်လူသစ်စုဆောင်းသည့်နှစ်တို့အတွက်ပြုပြင်ခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးမော်ဒယ်အတွက်ကောင်းမှုကုန်ကျစရိတ်သည်ပုံစံသည်ဒေတာများကိုကောင်းစွာတပ်ဆင်ကြောင်းဖော်ပြသည် (p = 16) ။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှုကို p <1.00 မှာသတ်မှတ်ထားနှင့်ညှိပျံ့နှံ့အချိုး (aPR) အစီရင်ခံခဲ့သည်။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာလေ့လာဆန်းစစ်မှုများကိုပြုလုပ်ရန်ကျွန်ုပ်တို့သည် Stata 0.05 (Stata Corp, College Station, Tex) software package ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
ယေဘုယျအားသင်တန်းသားများ၏ပျမ်းမျှအသက် (18-18 interquartile အကွာအဝေး [IQR]) 19 နှစ်ပေါင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ ဝက် (57%) ထက်အနည်းငယ်ပိုပြီးတရုတ်ခဲ့ကြသည်, 33% မလေးခဲ့ကြခြင်းနှင့်အရာကြွင်းလေအိန္ဒိယနှင့် Eurasian ခဲ့ကြသည်။ လူမျိုးရေးနှင့်အစဉ်အဆက် FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ရှိခြင်းများအတွက်လွတ်လပ်သော variable တွေကိုအကြားမျှမကစာရင်းအင်းသိသိသာသာအပြန်အလှန်အသုံးအနှုန်းများရှိခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုလေးဆယ်ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်းကကျောင်းမခံခဲ့ရပါ။ အဆိုပါဆယ်ကျော်သက်များ၏အကြောင်း 40% ကျောင်းပညာရေး၏≤10နှစ်ပေါင်းရှိခဲ့ပါတယ်။ စစ်တမ်း၏အချက်မှာကျောင်းမခံခဲ့ရသူ 140 ၏, 66 (47%) ကျောင်းမှကျောင်းထွက်ဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါလူမှုဒေသစစ်တမ်းများနှင့်အန္တရာယ်အပြုအမူတွေအတွက်အကျဉ်းချုံးထားပါသည် စားပွဲတင် 1။ အဆိုပါပျမ်းမျှပထမဦးဆုံးလိင်အသက်အရွယ် 16 (IQR: 15-18) နှစ်အရွယ်မှာနှင့်တစ်သက်တာအတွက်လိင်မိတ်ဖက်များ၏ပျမ်းမျှအရေအတွက်က3(IQR: 2-6) ဖြစ်ခဲ့သည်။ သင်တန်းသားများကိုအဘယ်သူအားမျှအစဉ်အဆက်လိင်များအတွက်ပေးဆောင်ခဲ့သည်။ လေးဆယ်ခုနစ်ရာခိုင်နှုန်းကိုအက်စ်တီအိုင်နှင့်အတူအပြုသဘောခဲ့ကြသည်။ ရောဂါ HIV ပိုးမရှိဖြစ်ပွားမှုရှိခဲ့သည်။
စားပွဲတင် 1 ။ 16-19 အသက်လိင်တက်ကြွဆယ်ကျော်သက်အကြားရွေးချယ်ထားသည့်ဝိသေသလက္ခဏာများအားဖြင့်အမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားနှင့်အတူလိင်။
အစဉ်အဆက် FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ဘဲလျက်နှင့်ဆက်စပ် FSWs နှင့်အကြောင်းရင်းများနှင့်အတူလိင်သူလိင်ကွဲအထီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏အချိုးအစား
တစ်ဆယ့်ရှစ် (39%, 95% CI: 34% -45%) သည် FSW များနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖူးကြောင်းအစီရင်ခံခဲ့သည်။ တရုတ် (၄၄%) သည်မလေးရှား (၂၉%) ထက်ပိုမိုများပြားသည် (p = 44) ။ အဆိုပါ bivariate ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း, ပိုမိုမြင့်မားသောပုန်ကန်မှု (p = 29), နိမ့် Self- လေးစားမှု (p = 0.02) နှင့်ပိုမိုမြင့်မားရိပ်မိပြင်ပထိန်းချုပ်မှု (p = 0.002) အစီရင်ခံနှင့်၎င်းတို့၏ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုပျမ်းမျှအားသို့မဟုတ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသော (p = 0.02) ) FSW များနှင့်လိင်ဆက်ဆံရန်ပိုဖြစ်နိုင်သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်း၏ကြိမ်နှုန်း (p <0.01) သည် FSW နှင့်လိင်ဆက်ဆံဖူးသူများအကြားတွင်ပိုမိုများပြားသည်။ ပညာရေးအဆင့် (p = 0.02)၊ မိဘ၏လွှမ်းမိုးမှု [မိဘအုပ်ထိန်းမှုညွှန်းကိန်း - p = ၀.၂၀; လုပ်ပိုင်ခွင့်အညွှန်းကိန်း - p = 0.001] နှင့်သက်တူရွယ်တူများ၏လွှမ်းမိုးမှု [သက်တူရွယ်တူချိတ်ဆက်မှု - p = 0.62] သည်ဤအပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်မှုမရှိပါ။
မှာပြထားတဲ့အတိုင်း စားပွဲတင် 2FSW နှင့်လိင်ဆက်ဆံဖူးသူအမျိုးသားများသည်အသက် ၁၆ နှစ်မတိုင်မီလိင်ဆက်ဆံရန်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည် (p = 16) နှင့်လိင်ဆက်ဆံဖက်များပိုမိုများပြားခြင်း (p <0.01) သို့သော်၎င်းတို့တွင်လိင်မှုကိစ္စတက်ကြွသောရည်းစား (p <0.001) ရှိခဲ့ဖူးခြင်းမှာသိသိသာသာနည်းပါးပြီး၊ လိင်အင်္ဂါများအားလိင်အင်္ဂါ (p <0.001)၊ မိတ်ဖက်အမျိုးအစားအားလုံးကိုနှင့်အတူ p = 0.001) ။
စားပွဲတင်2။ 16-19 အသက်လိင်တက်ကြွဆယ်ကျော်သက်အကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအားဖြင့်အမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားနှင့်အတူလိင်။
(multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွင်စားပွဲတင် 3), 16 အသက်အနှစ် (Apr 1.79 CI မတိုင်မီလိင်အစပျိုးသူကိုမြီးကောင်ပေါက်:) 1.30-2.46: 1.75-1.28), တစ်ဦးလိင်တက်ကြွရည်းစား (Apr 2.38 CI 0.96-0.93) မရှိခဲ့ဘူး, နိမ့် Self-လေးစားမှုရမှတ် (Apr 0.98 CI သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည် အဆင့်မြင့်ပုနျကနျရမှတ် (Apr 1.03 CI: 1.00-1.07) နှင့်ကြည့်ရှုအားပေးညစ်ညမ်းပိုပြီးမကြာခဏ (Apr 1.47 CI: 1.04-2.09) FSWs နှင့်အတူလိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။
စားပွဲတင်3။ Poisson ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်များ။
အစဉ်အဆက် FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ဖူးသူတို့တွင်, 38% ကြွင်းသောအရာတစ်ရည်းစား (41%) သို့မဟုတ်တစ်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက် (14%) နှင့်အတူအဓိကအားစဉ်တစ် FSW နှင့်အတူသူတို့ရဲ့ပထမဦးဆုံးလိင်ခဲ့ပွီးလြှငျသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ FSWs နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံများ၏ပျမ်းမျှသက်တမ်းအရေအတွက်အား2(1-3 IQR) ဖြစ်ခဲ့သည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူခြင်း၏အသုံးအများဆုံးတည်နေရာထိုင်း (51%) နှင့်အင်ဒိုနီးရှား (40%) ကနောက်တော်သို့လိုက်, စင်္ကာပူ (17%) ၌ရှိ၏။ ယေဘုယျအား 30% (ဎ = 35) ကိုပြီးခဲ့သည့်တစ်နှစ်အတွက်တသမတ်တည်း FSWs နှင့်အတူကွန်ဒုံးမသုံးကြဘူး။ ဖြေဆိုသူ (51%) ၏ထက်ဝက်ကာလအစဉ်အမြဲလမ်းလုပ်သားများနှင့်အတူတန်ဆာ-based FSWs နှင့်အတူလိင်နှင့် 35% ရှိခဲ့လေသည်။
မလေးဆယ်ကျော်သက်များသည်မလေးရှားမဟုတ်သူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် FSW နှင့်ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုရန်သိသိသာသာနည်းပါးသည် (၅၉% နှင့် ၂၀%၊ p <59) ။ FSWs နှင့်ကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုသူများနှင့် FSW များနှင့်လိင်ဆက်ဆံမှုအရေအတွက်သိသိသာသာကွာခြားမှုမရှိပါ (Median (IQR): 20 (0.001-2) vs. 1 (3-2), p =2) ။ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုသူများသည်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပတ်သက်သော၎င်းတို့၏သဘောထားမှတ်ချက်တွင်ကိုက်ညီမှုမရှိသောကွန်ဒုံးအသုံးပြုသူများနှင့်မတူခြင်းမရှိပါ (၂၃ (၂၁-၂၅)၊ ၂၃ (၂၁-၂၅)၊ p = 3) ။
၀ န်ထမ်းခေါ်ယူမှုတွင်တွေ့ရှိရသည့် STIs ၏အချိုးအစားမှာ FSW နှင့်လိင်ဆက်ဆံသူများနှင့် ၄၁.၉% နှင့် ၄၉.၇%၊ p = 41.9 တို့နှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ သို့သော် FSW နှင့်လိင်ဆက်ဆံဖူးဖူးသောဆယ်ကျော်သက်များအနက်ကွန်ဒုံးကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသောသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက FSW နှင့်အခြားသောလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များနှင့်ကွန်ဒုံးကိုမသုံးသောသူများအကြားရောဂါလက္ခဏာပြ STIs သိသိသာသာမြင့်မားသည် (၅၉% နှင့် ၁၇%၊ p <49.7) ။ စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအရသိသာထင်ရှားသော်ငြားလည်းပြည့်တန်ဆာအိမ်မဟုတ်သည့် FSW များနှင့်လိင်ဆက်ဆံခဲ့ဖူးသူများအနက်ရောဂါပိုးရှိသည့် FSW များနှင့်လိင်ဆက်ဆံဖူးသူများနှင့်သာနှိုင်းယှဉ်လျှင်ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိသည့် STIs သည်ပိုမိုမြင့်မားခဲ့သည် (0.19% vs. 59%, p = 17) ။ သင်္ဘောသဖန်းသီး 1 နှင့်2အသီးသီးတိုင်းပြည်နှင့် FSWs အမျိုးအစားအားဖြင့်ကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုသူမြား၏ရာခိုင်နှုန်းကိုပြ။ ကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု (53%) ၏အမြင့်ဆုံးနှုန်းကိုအင်ဒိုနီးရှားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများဝယ်သူတို့တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်ခဲ့သည်။ တန်ဆာ-based လိင်လုပ်သားများနှင့်အတူလိင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုနိမ့်ဆုံး (39%) သတင်းပေးပို့နေချိန်တွင်လမ်းလုပ်သားများနှင့်အတူလိင်အတွက်စေ့စပ်တဲ့သူသင်တန်းသားများကိုကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအမြင့်မားဆုံးရာခိုင်နှုန်း (23%) ကဖော်ပြခဲ့သည်။
သင်္ဘောသဖန်း 1 ။ လိင်တက်ကြွဆယ်ကျော်သက်များ၏ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားများတိုင်းပြည်အားဖြင့်အတိတ်နှစျတှငျအမြိုးသမီးလိင်လုပ်သားများနှင့်အတူကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုတဲ့သူ 16-19 နှစ်ပေါင်းအသက်။
* Comprise 10 တရုတ်,6မလေးရှား,2ကမ္ဘောဒီးယား, 10 အခြားအာရှနိုင်ငံများနှင့်2အနောက်နိုင်ငံများ။
သင်္ဘောသဖန်း2။ လိင်တက်ကြွဆယ်ကျော်သက်များ၏ရာခိုင်နှုန်းအမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားများအမျိုးအစားအားဖြင့်အတိတ်နှစျတှငျအမြိုးသမီးလိင်လုပ်သားများနှင့်အတူကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးကိုအသုံးပြုတဲ့သူ 16-19 နှစ်ပေါင်းအသက်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာစင်္ကာပူမှာအများပြည်သူကာလသားဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်းလိင်ကွဲတက်ကြွဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးတစ်ဦးကစဉ်းစားဆင်ခြင်စရာအချိုးအစား (39%) အစဉ်အဆက် FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ပွီးလြှငျသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ဤသည် 84 နှစ်ဆယ်ကျော်သက်အသက် 14 ၏ 19% အတိတ်တစ်နှစ်အတွက် FSWs သွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သောအတွက်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတွင်ကာလသားဆေးခန်းများတွင်အခြားလေ့လာမှု, အစီရင်ခံထက်နိမ့်သည်။  ငါတို့သည်လည်းဒီအပြုအမူမှသြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါ multivariate-ချိန်ညှိမော်ဒယ်တှငျကြှနျုပျတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်များ၏အငယ်အသက်, အနိမ့် Self-လေးစားမှုရမှတ်အဆင့်မြင့်ပုနျကနျရမှတ်, ဘယ်တော့မှသတင်းပေးပို့သူကိုမြီးကောင်ပေါက်မယ့်လိင်တက်ကြွရည်းစားရှိခဲ့နှင့်ညစ်ညမ်းပိုပြီးမကြာခဏကြည့်ရှုခဲ့ဘဲလျက်အစဉ်အဆက်သတင်းပို့ဖို့ပိုဖွယ်ရှိကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရသည် FSWs နှင့်အတူလိင်။
အဖြစ်ဝေးကြှနျုပျတို့သိအဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အကြားလိင်လုပ်သားများနှင့်အတူလိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးနှငျ့ဤ 16 မှ 18 အသက်ကနေဒါအထက်တန်းကျောင်းသားများအကြားကောက်ယူခဲ့ပါတယ်အပေါ်အပြုအမူအပေါ်အာရုံစူးစိုက်တစ်ဦးတည်းသာလေ့လာမှုလည်းမရှိ။  ဒီ Cross-Section လေ့လာမှု, ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်ရှိခြင်းအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်ထိုကဲ့သို့သော stripteases အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများစောင့်ကြည့်, (ကြောင်းအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော 13 နှစ်သို့မဟုတ်ဖြစ်ပါတယ်) ထိုသို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ precocity အဖြစ်အချက်များသို့ကြည့်ရှုကြ၏။ multivariate ညှိနှိုင်းမှုပြီးနောက်မှသာစောင့်ကြည့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများသိသိသာသာအချက်ဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်များအနေဖြင့်, ဖြစ်နိုင်သည်ကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသော variable ကို cutoffs နှင့်အကဲဖြတ်နည်းလမ်းများမှကွဲပြားပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏ရလဒ်များကိုစီးပွားဖြစ်လိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးအရွယ်ရောက်ယောက်ျားအပေါ်လေ့လာမှုများနှင့်အတူတသမတ်တည်းဖြစ်ကြသည်။ 18 မှစပိန်အထီးလူဦးရေအသက် 49 အပေါ်လေ့လာမှုတစ်ခုသူတို့အားတစ်ခုတည်းခဲ့ကြသည်နှင့်အဟောင်းများကို 16 နှစ်ပေါင်းလိင်ဝယ်ဖို့ထက်ပိုနိုင်ဖွယ်ခဲ့ကြသည်မတိုင်မီလိင်အစပျိုးသူကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။  သြစတြေးလျအတွက်တစ်ဦးကအစီရင်ခံစာတစ်ခုတည်းနေသောအရွယ်ရောက်ပြီးသူယောက်ျားပေါင်းလူမှုရေးအရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေများတွင်အပြန်အလှန်နဲ့ရငျးနှီးမှုအတွက် FSWs နှုနျးနိုင်စွမ်းကင်းမဲ့ကြောင်းရှင်းပြသည်။  ထို့အပြင်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှု 27 နှစ်ပေါင်းပျမ်းမျှအသက်အရွယ်နှင့်အတူအိန္ဒိယရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားအကြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရန်နှင့်အတူဆက်နွယ်နေတဲ့သိသာထင်ရှားသောအချက်ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်ညစ်ညမ်းသူတို့ကို paid လိင်ဆီသို့တစ်ဦးထက်ပိုအပြုသဘောတိုးတက်စေနှီးနှောခဲ့သည်။ 
ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကိုလည်း Jessor ရဲ့ပြဿနာအပြုအမူသီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီသောမြီးကောင်ပေါက်မှထူးခြားသောဖြစ်ကြောင်းအချက်များသရုပ်ပြခဲ့သည်။  ထိုသို့သော FSWs နှင့်အတူလိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးအဖြစ်ပြဿနာအပြုအမူတွေ ([ကရှင်းပြသည်5) ထိုသို့သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစတင်များ၏အစောပိုင်းအသက်အရွယ်အဖြစ် (ဥပမာအနိမ့် Self-လေးစားမှုပြစ်မှားပုန်ကန်အဖြစ်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစနစ် () ၏ထိန်းချုပ်မညီမမျှ၏အကျိုးဆက်, ထိုကဲ့သို့သောမီဒီယာနှင့်ညစ်ညမ်းအဖြစ်ကိုရိပ်မိပတ်ဝန်းကျင်စနစ် () နှင့်အမူအကျင့်မှုစနစ်အဖြစ်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း]) တို့အားထငျရှားစ ။ မှတ်စု၏, Self-လေးစားမှုတစ်ခုစနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အကြား (ဥပမာအက်စ်တီအိုင်၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ခြင်းနှင့်သမိုင်းကဲ့သို့) အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်မရခဲ့သည်။  သို့ရာတွင်ထိုသို့အစဉ်အဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာ FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ရှိခြင်းနဲ့ဆက်စပ်တဲ့ခိုင်မာတဲ့အချက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ဤသည်ဖြစ်နိုင်သည်ရည်းစားရှာတွေ့ဖို့နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းကနေဖြစ်ပေါ်ပြီးသောသူတို့၏အနိမ့် Self-တန်ဖိုးထားမြှင့်တင်မယ့်နည်းလမ်းအဖြစ် FSWs နှင့်အတူလိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးသူတို့ကိုရှင်းပြနိုင်ဘူး။ ဤသည်ကိုလည်းသူတို့ Self-လေးစားမှုသို့မဟုတ်ကြွားအကြောင်းပြချက်များအတွက်မြှင့်တင်ရန်လိင်အသုံးပြုခဲ့တဲ့တွေ့အာဖရိကန်အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်အကြားတစ်ဦးလေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်နှင့်အတူအရတော့ဖြစ်ပါတယ်။  သို့သော်လည်းကျနော်တို့ပိုကောင်းနိမ့် Self-လေးစားမှုနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရန်အကြားဆက်ဆံရေးကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်ထပ်မံသုတေသနလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ ကြားဝင်သြဇာလွှမ်းမိုးမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ပစ်မှတ်ထား, ဒါပေမယ့်လည်းစုပေါင်းပြဿနာများ၏ရောဂါထက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သီးသန့်ဖြစ်ခြင်းကဲ့သို့သူတို့ကိုနှင့် ပတ်သက်. အဖြစ်ပြဿနာအပြုအမူဖြေရှင်းသင့်တယ်မသာ။
ကျနော်တို့အစဉ်အဆက် FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ရှိခြင်းနဲ့ဆက်စပ်ခံရဖို့ရောဂါအက်စ်တီအိုင်ကိုမတှေ့ခဲ့ပေ။ ဒီအတှကျအခြို့သောဖြစ်နိုင်သောရှင်းလင်းချက်ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုရလဒ်ကို FSWs နှင့်အတူလိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျး၏တစ်သက်တာပျံ့နှံ့ခဲ့သော်လည်းပထမဦးစွာအက်စ်တီအိုင်, လေ့လာမှုမှကျောင်းအပ်၏အချက်မှာရောဂါခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့်ရှေ့တော်၌, လိင်ဝယ်ကြသူသင်တန်းသားများကိုစူးရှသောအက်စ်တီအိုင်နှင့်အတူအပြုသဘောပါပြီနိုင်ကကြိုတင်ဒီဆေးခန်းကိုတကျရောကျဖို့တခြားနေရာကုသပါပြီ။ ဒုတိယအတစ် FSW ကနေအက်စ်တီအိုင်လေးလည်းများ၏အန္တရာယ်ကိုလည်းလိင်အလုပ်သမားများနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်၏အချက်မှာသူမ၏ကာလသား status ကိုအတူကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအပေါ်မှီခိုသည်။ တကယ်တော့ကျနော်တို့အက်စ်တီအိုင်တသမတ်တည်း FSWs နှင့်အတူကွန်ဒုံးမသုံးခဲ့ဘူးသူတို့တွင်သိသိသာသာပိုမိုမြင့်မားစေခြင်းငှါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့သင်တန်းသားများကိုထက်ဝက်ခန့်စင်္ကာပူတွင်တန်ဆာထံမှလိင်ဝယ်ယူခဲ့သည်။ စင်္ကာပူမှာအားလုံးတန်ဆာလိုင်စင်နှင့် 100% ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုစတင်တည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, တန်ဆာ-based လိင်အလုပ်သမားများ, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ Surveillance အစီအစဉ်အောက်မှာ gonorrhea နှင့်ကလျမီဒီရာဘို့ bi-လစဉ်စိစစ်နှင့် HIV နှင့်ဆစ်ဖလစ်ဘို့လေးလစဉ်စိစစ်ခံယူဖို့ရှိသည်။ အက်စ်တီအိုင်နှင့်အတူအပြုသဘောနေသောလိင်လုပ်သားဆေးခန်းမှာကုသနှင့်ကုသမှု၏ကာလအတွင်းလိင်အလုပ်ကိုရပ်တန့်ဖို့ရှိသည်နေကြသည်။
သည်အခြားလူဦးရေဖို့ယေဘုယျလျော့ပါးသောဤလေ့လာမှုန့်အသတ်ရှိပါတယ်။ ဒီမြီးကောင်ပေါက်အကြား Notifier ကာလသားရောဂါထက်ပိုမိုလေးပုံသုံးပုံမှတက်ရောက်ရသောစင်္ကာပူအတွက်တစ်ခုတည်းသောအထူးကုကာလသားဆေးခန်းဖြစ်ပါသည်သော်လည်းပထမ, ဒီဆေးခန်းတက်ရောက်ရန်သို့မဟုတ်၏စိစစ်မှုနှင့်ကုသမှုပြုလုပ်ရန်ရည်ညွှန်းခဲ့ကြသူလိင်တက်ကြွဆယ်ကျော်သက်သာကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်ပါသည် အက်စ်တီအိုင်။ မှတ်စု၏, အားလုံးမဟုတ်လိင်တက်ကြွဆယ်ကျော်သက်ကာလသားရောဂါလက္ခဏာတွေရှိသည်နှင့်ထို့ကြောင့်ယင်းကာလသားဆေးခန်းတက်ရောက်ရန်သူကိုမြီးကောင်ပေါက်အထွေထွေသောလူဦးရေအတွက်လိင်တက်ကြွဆယ်ကျော်သက်ကိုယ်စားပြုမည်မဟုတ်ပါ။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, FSWs နှင့်အတူလိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံသူကိုမြီးကောင်ပေါက်အက်စ်တီအိုင်ရှိသည်မဟုတ်နိုင်ပြီးဤအရပ်, ထိုကာလသားဆေးခန်းမှာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရှာနိုငျသညျ။ ဒေတာသဘာဝ Cross-Section ဖြစ်သကဲ့သို့, ငါတို့အန္တရာယ်အချက်များအကြားယာယီကြားဆက်ဆံရေးထူထောင်နိုင်ဘူးနှင့်အစဉ်အဆက် FSWs နှင့်အတူလိင်ခဲ့ဘဲလျက်။ အဲဒီအစား FSWs နှင့်အတူတသက်တာကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှု, ငါတို့သာအတိတ်နှစျတှငျကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုအကဲဖြတ်။ ကျနော်တို့အရည်အသွေးသုတေသနဘို့လိုအပ်ကြောင်းအပြစ်လွှတ်သောကိုလည်းတွန်းအားအပေါ်မည်သည့်အခြနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အကြားလိင်ဝယ်ယူများ၏အခြေအနေတွင်ဆွဲနိုင်ကြဘူး။ ကျွန်ုပ်တို့၏အတော်လေးသေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစားကိုလည်း FSWs နှင့်အတူကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုနှင့်ဆက်စပ်လွတ်လပ်သောအချက်များအကဲဖြတ်ရန်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းအင်းပါဝါကန့်သတ်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့လေ့လာမှုတွေ့ရှိချက်အထီးမိတ်ဖက်သို့မဟုတ်အထီးလိင်လုပ်သားများနှင့်အတူလိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးသတင်းပေးပို့သူကိုအထီးမြီးကောင်ပေါက်မှယေဘူယျမရနိုင်ပါ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတစ်ခုအမြင့်ဆုံးပါဝင်မှုနှုန်းသည်နှင့်တစ်ဦး Multi-တိုင်းရင်းသားနမူနာရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့စနစ်တကျဤရှုပ်ထွေးအပြုအမူနှင့်အတူတတ်နိုင်သမျှအသင်းအဖွဲ့များကိုသိရှိနိုင်ဖို့တစ်ဂေဟစနစ်မော်ဒယ်လည်းလျှောက်ထားကြသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်မြီးကောင်ပေါက်နှင့်၎င်း၏ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးသက်ရောက်မှုတွေအကြားလိင်ဝယ်ယူ၏အပြုအမူအပေါ်ထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုထောက်ပံ့ပေး။
တစ်ဦးကာလသားဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်းလိင်ကွဲတက်ကြွဆယ်ကျော်သက်ကြားတွင်လိင်ဝယ်ယူ၏မြင့်အချိုးအစားအပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးစိုးရိမ်စရာဖြစ်ပါတယ်။ မြီးကောင်ပေါက်များ၏အကြောင်းသုံးပုံတစ်ပုံကိုလည်း FSWs နှင့်အတူတသမတ်တည်းကွန်ဒုံးမသုံးကြဘူး။ သူတို့ကစာချုပ်ကိုချုပ်ဆိုတစ်အလားအလာအရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုတစ်ခုပင်နိမ့်ဖြစ်နိုင်ခြေကိုအစီရင်ခံတင်ပြဘယ်သူကိုနှင့်အတူထိုကဲ့သို့သောသူတို့၏ပုံမှန်သို့မဟုတ်ပေါ့ပေါ့မိတ်ဖက်အဖြစ်ယေဘုယျလူဦးရေရန်အက်စ်တီအိုင်ထုတ်လွှင်။  ထို့အပြင်ထိုကဲ့သို့သော streetwalkers အဖြစ် Non-စညျးမဉျြးစညျးကမျးလိင်လုပ်သားများနှင့်အတူလိင်သူဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦး 100% ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအစီအစဉ်ကိုထူထောင်ထားပြီးဘယ်မှာစင်္ကာပူအတွက်တန်ဆာ-based လိင်လုပ်သားများနှင့်အတူလိင်ခဲ့တဲ့သူတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကိုက်ညီမှုကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုမြင့်မားအချိုးအစားကဖော်ပြခဲ့သည်။  ဒါကြောင့်လည်းရေခြားမြေခြားလမ်းများသို့မဟုတ်ပေါ်တွင်တရားမဝင် operating FSWs ကနေလိင်ကိုဝယ်သူကိုစင်္ကာပူမြီးကောင်ပေါက်ကိုခြေရာခံဖို့စိန်ခေါ်နေပါတယ်။ စင်္ကာပူရှိကျောင်းများအတွက်လက်ရှိလိင်ပညာရေးလိင်နှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုဝယ်ယူအကြောင်းကိုမြီးကောင်ပေါက်ပညာပေးအတွက်နှုတ်ဆိတ်နေမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နိုင်သည်။ တောင်မှထို့နောက်ကျောင်းမှကျောင်းထွက်ဤအစီအစဉ်မှအကျိုးပေးနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျနော်တို့မြီးကောင်ပေါက်သည်အခြား setting များအနေဖြင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုရှာအံ့သောငှါအံ့သောငှါဝန်ခံပေမယ့်စင်္ကာပူမှာတစ်ခုတည်းသောအများပြည်သူကာလသားဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကို client များပစ်မှတ်ထားကြားဝင်ဤနည်းလမ်းအနေဖြင့်လိင်ဝယ်ယူမြီးကောင်ပေါက်မှကာလသား-ကြိုတင်ကာကွယ်ပညာရေး, စိစစ်ခြင်းနှင့်ကုသမှုပေးမယ့်လက်တွေ့ကျတဲ့နှင့်ဖြစ်နိုင်မဟာဗျူဟာအဖြစ်ဝတ်ပြုကြလော့။ ကြားဝင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ကာလအတွင်းစတင်သင့်အဘယ်ကြောင့်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်ရောက်ထက်အပြုအမူပြောင်းလဲမှုကိုပိုမိုအာမင်ဖြစ်ပါတယ်။  ထိုသို့သောအပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီနှင့်မီဒီယာ-related အချက်များအဖြစ်လွှမ်းမိုးမှု၏ကွဲပြားခြားနားသောအဆင့်ဆင့်ပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းဖြင့် FSWs နှင့်အတူလိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးမြီးကောင်ပေါက် လိုက်. ရပါမည်။ ကာလသားဆေးခန်း၌ဤစစ်တမ်းကနေတွေ့ရှိချက်အရလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေအပေါ်အမျိုးသားရေးစစ်တမ်းများမြီးကောင်ပေါက်များပါဝင်သင့်တယ်, ဒီအပြုအမူ၏ရေရှည်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းနှင့်စောင့်ကြည့်ဘို့ခွင့်ပြု FSWs နှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအပေါ်မေးခွန်းများကိုထည့်သွင်း။ FSWs နှင့်အတူလိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးမြီးကောင်ပေါက်များ၏ပိုကြီးတဲ့အရေအတွက်ကနှင့်အတူအနာဂတ်လေ့လာမှုများသူတို့ရဲ့ကွန်ဒုံးသုံးအပြုအမူတွေသို့ထပ်မံထိုးထွင်းသိမြင်မှုကိုပေးနိုငျတယျ။
FSWs နှင့်အတူလိင်မြားတှငျပါဝငျခွငျးသတင်းပေးပို့သူကာလသားဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်းအထီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏ထူးဆန်းသောအချိုးအစားရှိပါတယ်။ သူတို့ထဲကတစ်ဦးသိသိသာသာအချိုးအစားကွန်ဒုံးမသုံးခဲ့ပါဘူးအဖြစ်, သူတို့ကစင်္ကာပူမှာအထွေထွေအမျိုးသမီးလူဦးရေနှင့်ကျော်လွန်ပြီးကာလသားဂီယာများအတွက်အလားအလာတံတားဖြစ်ကြသည်။ ကျန်းမာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူနေမှုပုံစံစတဲ့များအတွက်အခြေခံအုတ်မြစ်မှသကဲ့သို့ထိုကွောငျ့, ပစ်မှတ်ထားကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များကိုမြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်း start သငျ့သညျ။
S1 ဖိုင်မှတ်တမ်း။ ကျင့်ဝတ်အတည်ပြုချက်။
ကျနော်တို့လေ့လာမှု facilitated တဲ့သူနဲ့ DSC ဆေးခန်းများ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့်ဝန်ထမ်းများကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ကိုလည်းဒေတာစုဆောင်းမှုအတွက်ကူညီသူကို Dede ထန်းနှင့်ရေမွန် Lim ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အဆိုပါလေ့လာမှုကိုအမျိုးသားဆေးဘက်ဆိုင်ရာသုတေသနကောင်စီကရန်ပုံငွေမြီးကောင်ပေါက်တစ်အပြုအမူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလေ့လာမှု၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
ပဋိသန္ဓေနှင့်စမ်းသပ်ချက်ဒီဇိုင်း: WLM ။ JYSN: အစမ်းသပ်ချက်ဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ ဒေတာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ: JYSN WLM ။ JYSN WLM: စက္ကူရေးသားခဲ့သည်။
1 ။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအိုယူနီဆက်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ HIV / AIDS ရောဂါတုံ့ပြန်မှု: ကပ်ရောဂါ update ကိုနှင့်တစ်လောကလုံး access ကိုဦးတည်ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင်တိုးတက်မှု: တိုးတက်မှုအစီရင်ခံစာ 2011: ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ဂျီနီဗာ; 2011 ။
<>3။ Sok P, Harwell JI, Dansereau L, McGarvey S, Lurie M, Mayer KH ။ ကမ္ဘောဒီးယားဆေးရုံ၊ ဖနွမ်းပင်တွင်အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးခြင်းမတိုင်မီအထီးလူနာများ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူပုံစံများ။ လိင်ကျန်းမာရေး 2008;5(4): 353-8 ။ pmid: 19061555; PubMed ဗဟို PMCID: PMC2853752 ။ Doi: 10.1071 / sh08001ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar ကြည့်ရန်အပိုဒ် PubMed / NCBI Google Scholar 4. ယန်ကို C, Latkin, CA, လျူ P ကို, နယ်လ်ဆင် Ke, ဝမ်ကို C, Luan R. စီချွမ်ပြည်နယ်, တရုတ်အတွက်အထီး client များအကြားစီးပွားဖြစ်လိင်အပြုအမူအပေါ်တစ်ဦးကအရည်အသွေးလေ့လာမှု။ အေအိုင်ဒီအက်စ်စောင့်ရှောက်မှု။ 2010;22(2):246–52. Doi: 10.1080 / 09540120903111437 pmid: 20390503.5 ။ နှစ်ထပ် MR, Miller ကအီး, Raj တစ်ဦးက, Saggurti N ကို, Donta B, Silverman JG ။ အိန္ဒိယအမျိုးသားများ၏စီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားများအသုံးပြုခြင်း - ပျံ့နှံ့ခြင်း၊ ကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောကျားမသဘောထားများ။ ဝယ်ယူကိုယ်ခံစွမ်းအားချို့တဲ့ Syndrome ၏ဂျာနယ်။ 2010;53(2):240–6. Doi: 10.1097 / QAI.0b013e3181c2fb2e pmid: 19904213; PubMed ဗဟို PMCID: PMC3623287.6 ။ Idele P ကို, Gillespie တစ်ဦးက, Porth T က, ဆူဇူကီးကို C, Mahy M က, Kasedde S က, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အကြား HIV နှင့် AIDS ရောဂါ၏ကူးစက်ရောဂါ: လက်ရှိအနေအထားကိုမညီမျှမှု, နှင့်အချက်အလက်ကွာဟချက်။ အေအိုင်ဒီအက်စ်၏ JAIDS ဂျာနယ်။ 2014; 66: S144-S53 ။ Doi: 10.1097 / QAI.0000000000000176 ။ pmid: 249185907 ။ ဂျက်ဆင်, CA, Henderson က M, ဖရန့် JW, ဟော် SJ ။ မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်နှင့်လူငယ်လူကြီးအတွက်မျိုးစုံအန္တရာယ်အပြုအမူများကြိုတင်ကာကွယ်ရေးခြုံငုံသုံးသပ်။ အများပြည်သူကျန်းမာရေးဂျာနယ်။ 2012;34 Suppl 1:i31–40. Doi: 10.1093 / pubmed / fdr113 pmid: 22363029.8 ။ အားလုံးအတွက်မြီးကောင်ပေါက်အေအိုင်ဒီအက်စ်ယူနီဆက်, UNAIDS ၏, UNFPA မှ, WHO က, PEPFAR ကမ္ဘာ့ရန်ပုံငွေအဖွဲ့, MTV ရဲ့အသကျရှငျဖောင်ဒေးရှင်း 2015.9 နခွေကိုအဆုံးသတ်ရန်။ Thuy NT, Lindan က CP, Phong TH, ဗန်: D, Nhung VT, ဘားကလေး J ကို, et al ။ တောင်ပိုင်းဗီယက်နမ်အတွက်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါဆေးခန်းမှာအထီးတက်ရောက်ခြင်းဖြင့်စီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားများမှလာရောက်လည်ပတ်သူခန့်မှန်း။ AIDS ရောဂါ။ 1999;13(6):719–25. pmid: 10397567 ။ Doi: 10.1097 / 00002030-199904160-0001310 ။ Coughlan အီး, Mindel တစ်ဦးက, Estcourt CS ။ အမျိုးသမီးစီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားတွေရဲ့အထီး clients များ: HIV ပိုး, STDs နှင့်အန္တရာယ်အပြုအမူ။ STD & AIDS ရောဂါဆိုင်ရာနိုင်ငံတကာဂျာနယ်။ 2001;12(10):665–9. pmid: 11564334 ။ Doi: 10.1258 / 095646201192389511 ။ de la et al Fuentes L ကို, ဆွာရက်ဇ်က M, Vallejo က F, Garcia က M ကို, လိုပက်ဇ်က M, Belza MJ ။ စပိန်နိုင်ငံတွင်လိင်နှင့်ကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအတွက်ပေးဆောင်တဲ့သူအမျိုးသားများအတွက်: အထွေထွေလူဦးရေရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးနမူနာများတွင်ပျံ့နှံ့ခြင်းနှင့်ဆက်စပ်မှု။ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု။ 2008;84(3):207–11. Doi: 10.1136 / sti.2008.029827 pmid: 18339659.12 ။ Lavoie က F, Thibodeau ကို C, Gagne MH, Hebert အမ် ကွိဘက်မြီးကောင်ပေါက်အတွက်လိင်ဝယ်ယူရောင်းချခြင်း: အန္တရာယ်နှင့်အကာအကွယ်အချက်များ၏လေ့လာမှုတစ်ခု။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2010;39(5):1147–60. doi: 10.1007/s10508-010-9605-4 pmid:20217225.13. Kaestle အီး။ ရောင်းချခြင်းနှင့်လိင်ဝယ်ယူ: အန္တရာယ်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်အကာအကွယ်အချက်များတစ် longitudinal လေ့လာမှု။ ကာကွယ်တားဆီးရေးသိပ္ပံ: ကာကွယ်တားဆီးရေးသုတေသနများအတွက် Society ၏တရားဝင်ဂျာနယ်။ 2012;13(3):314–22. doi: 10.1007/s11121-011-0268-8 pmid:22350114.14. DSC ဆေးခန်း 2013 နှစ်ပတ်လည်အစီရင်ခံစာ-ကာလသားစာရင်းအင်းများ။ လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါပိုးမကူးစက်ထိန်းချုပ်ရေး (DSC), အမျိုးသားအရေပြားစင်တာ, စင်္ကာပူ, 2014.15 ဦးစီးဌာန။ အသေးစားလုပ် SA, တောက်ပတီ ဆယ်ကျော်သက်လိင်လုပ်ဆောင်ချက်: တစ်ခုကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်, အန္တရာယ်-Factor ချဉ်းကပ်။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုများ၏ဂျာနယ်။ 1994;56(1):181–92. Doi: 10.2307 / 352712.16 ။ Sargent JD, သဲသောင်ပြင် ML, Dalton MA, Mott LA က, ကလိခြင်း JJ, Ahrens ကို MB, et al ။ မြီးကောင်ပေါက်အကြားဆေးလိပ်သောက်ကြိုးစားနေအပေါ်ရုပ်ရှင်များတွင်ဆေးရွက်ကြီးအသုံးပြုမှုကိုမြင်လျှင်၏အကျိုးသက်ရောက်မှု: section လေ့လာမှုကိုဖြတ်ကျော်။ BMJ ။ 2001;323(7326):1394–7. pmid: 11744562; PubMed ဗဟို PMCID: PMC60983 ။ Doi: 10.1136 / bmj.323.7326.139417 ။ McLaughlin SD, Micklin အမ် ပထမမွေးဖွားခြင်းနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာထိရောက်မှုအတွက်အပြောင်းအလဲများ၏အချိန်။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုများ၏ဂျာနယ်။ 1983;45(1):47–55. Doi: 10.2307 / 35129418 ။ Rosenberg ကအမ် လူ့အဖွဲ့အစည်းနှင့်ဆယ်ကျော်သက် Self-image ကို။ Princeton, NJ :, Princeton University ကစာနယ်ဇင်း; 1965 ။ Xi, 326 p p.19 ။ ဂျက်ဆင်ကို C, Henriksen L ကို, Foshee VA သို့။ အဆိုပါ authoritative မိဘအုပ်ထိန်းမှုညွှန်းကိန်း: ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အကြားခန့်မှန်းကျန်းမာရေးအန္တရာယ်အပြုအမူ။ ကနျြးမာရေးပညာရေး & အမူအကျင့်: ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးပညာရေးလူ့အဖွဲ့အစည်း၏တရားဝင်ထုတ်ဝေ။ 1998;25(3):319–37. pmid: 9615242 ။ Doi: 10.1177 / 10901981980250030720 ။ Mirande လေး။ ကိုးကားစရာ Group မှသီအိုရီများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ။ အိမ်ထောင်ရေးနှင့်မိသားစုများ၏ဂျာနယ်။ 1968;30(4):572–7. Doi: 10.2307 / 34949721 ။ Wong က ML, ချမ်း RK, Koh သည်: D, Tan ကနာရီ, Lim က FS, Emmanuel S က, et al ။ အာရှနိုင်ငံအတွင်းရှိမြီးကောင်ပေါက်အကြားအိမ်မထောင်မီလိင်ဆက်ဆံခြင်း: multilevel ဂေဟစနစ်အချက်များ။ ကလေးအထူးကု။ 2009;124(1):e44–52. Doi: 10.1542 / peds.2008-2954 pmid: 19564268.22 ။ Xantidis L ကို, McCabe အမတ်။ သြစတြေးလျအမျိုးသမီးစီးပွားဖြစ်လိင်လုပ်သားတွေရဲ့အထီးဖောက်သည်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဝိသေသလက္ခဏာများ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း။ 2000;29(2):165–76. pmid: 10842724 ။ Doi: 10.1023 / တစ်ဦး: 100190780606223 ။ Mahapatra B, Saggurti N. ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများနှင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းအထီးရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများကြား HIV-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအန္တရာယ်အပြုအမူတွေအပေါ်အကျိုးသက်ရောက်မှုမှ exposure ။ PloS တဦးတည်း။ 2014;9(11): e113599 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0113599 pmid: 25423311; PubMed ဗဟို PMCID: PMC4244083.24 ။ Jessor R ကို, ဗန် Den Bos J ကို, Vanderryn J ကို, ကော်စတာ FM ရေ, တာဘိုင်က MS ။ ဆယ်ကျော်သက်ပြဿနာအပြုအမူအတွက်အကာအကွယ်အချက်များ: မော်ဆိုးကျိုးများနှင့်ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာပြောင်းလဲမှု။ ဖွံ့ဖြိုးမှုဆိုင်ရာစိတ်ပညာ။ 1995; 31 (6): 923 ။ Doi: 10.1037 / 0012-1649.31.6.92325 ။ Goodson P ကို, Buhi ER, Dunsmore SC ။ self-လေးစားမှုနှင့်ဆယ်ကျော်သက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေ, စိတ်နေသဘောထားနှင့်ရည်ရွယ်ချက်များ: တစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှု။ ဆယ်ကျော်သက်ကျန်းမာရေးဂျာနယ်: ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆေးပညာများအတွက် Society ၏တာဝန်ရှိသူတဦးကထုတ်ဝေ။ 2006;38(3):310–9. Doi: 10.1016 / j.jadohealth.2005.05.026 pmid: 16488836.26 ။ ရော်ဘင်ဆင် ML, Holmbeck Gn, Paikoff R. လိင်နှင့်အာဖရိကန်အမေရိကန်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေရှိခြင်းတို့အတွက်အကြောင်းပြချက်တိုးမြှင့် self-လေးစားမှု။ လူငယ်နှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်၏ဂျာနယ်။ 2007;36(4):453–64. doi: 10.1007/s10964-006-9116-827. Wong က ML, ချမ်း RK, Tan ကနာရီ, Sen P ကို, Chio M က, Koh သည်ဃ စင်္ကာပူရှိကူးစက်မှုဆေးခန်းမှတဆင့်ကူးစက်သောအများပြည်သူလိင်တက်ရောက်ခြင်းလိင်ကွဲမြီးကောင်ပေါက်အကြားကွန်ဒုံးအသုံးပြုခြင်းကိုမှမိတ်ဖက်လွှမ်းမိုးမှုများနှင့်အတားအဆီးများအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှု။ ကလေးအထူးကု၏ဂျာနယ်။ 2013;162(3):574–80. Doi: 10.1016 / j.jpeds.2012.08.010 pmid: 23000347.28 ။ Wong က ML, ချမ်း R ကို, Koh သည်ဃ စင်္ကာပူမှာလိင်လုပ်သားများအကြားလိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှုအပေါ်အင်္ဂါဇာတ်နှင့်ခံတွင်းလိင်များအတွက်ကွန်ဒုံးမြှင့်တင်ရေးအစီအစဉ်များ၏ရေရှည်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ AIDS ရောဂါ။ 2004;18(8):1195–9. pmid: 15166535 ။ Doi: 10.1097 / 00002030-200405210-0001329 ။ Krosnick ဂျာ Alwin DF ။ အိုမင်းခြင်းနှင့်သဘောထားကိုပြောင်းလဲမှုလွယ်ကူစွာထိခိုက်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်လူမှုရေးစိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်။ 1989;57(3):416–25.
2 ။ McLaughlin MM, Chow EP, et al ဝမ်ကို C, ယန်ကို LG, ယန်ခ, Huang က JZ ။ တရုတ်နိုင်ငံတွင်အမျိုးသမီးလိင်လုပ်သားများလိင်ကွဲအထီး clients များကြားတွင်လိင်မှတဆင့်ကူးစက်သောရောဂါကူးစက်မှု: တစ်စနစ်တကျပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့် Meta-analysis သည်။ PloS တဦးတည်း။ 2013; 8 (8): e71394 ။ Doi: 10.1371 / journal.pone.0071394 pmid: 23951153; PubMed ဗဟို PMCID: PMC3741140 ။